Les photos du 15 Octobre 2020 - ewa.mg
News - Les photos du 15 Octobre 2020
tany Antsohihy, ny andron’ny 14 oktobra. Nomarihina tamin’ny
fametrahana fehezam-boninkazo eo amin’ny fasan’ny Filoham-pirenena
voalohany teto Madagasikara, Philbert Tsiranana sady rain’ny
Fahaleovantena izay notarihin’ny filoha Rajoelina Andry, tao
amin’ny kaominina Anahidrano, distrikan’Antsohihy, faritra Sofia.
Marika hita maso ho fankalazana ny faha-62 taona nijoroan’ny
Repoblika Malagasy sy ny faha-60 taona niverenan’ny
Fahaleovantenan’i Madagasikara. Hiasa manomboka izao ihany koa ny
“central hybride photovoltaïque-thermique”, ao Antsohihy, fokontany
Bekitrobaka Ambalabe Andrefana Antsohihy. Tsy nohadinoina ihany koa
ny mpianatra, notolorana “ kits scolaire” ho an’ny sekoly ao
amin’ny fari-piadidiam-pianarana Zap Anahidrano. Fitaovana feno,
ahitana aron’akanjo, kitapo, kahie, trousse ary gourde. Nahazo ny
anjarany ny eo anivon’ny polisim-pirenen, notokanana ny birao
vaovaon’ny talem-paritra. Olona miisa 2
138 no nisitraka ny Vatsy tsinjo avy amin’ny
L’article Les photos du 15 Octobre 2020 a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 15/10/2020
Miara-miasa izao ny Cnaps sy ny BNI Madagascar, ho fanavaozana sy ho fanamorana ny fisotroan-dronono ho an’ireo zokiolona. Tato anatin’ny roa taona izao, miezaka ny BNI manakaiky ny mponina sy mampihatra ny politika fi­sarihana ireo zokiolona misotro ronono avy amin’ny se­hatra tsy miankina sy ny fanjakana, ahafahan’izy ireo manohy mivantana na tsy mivantana ny fihariana amin’ny fampihodinana ny toekarena. Afaka mandraharaha ny zokiolona amin’izay sehatra manavanana azy, tsy ho vesatra ho an’ny fiarahamonina. Araka izany, misokatra ho an’ireo manana fifandraisana amin’ny Cnaps ny tambajotra ao amin’ny banky BNI Ma­da­gascar, manafaingana ny fikirakiran’izy ireo ny volany. Resen-dahatra ireo zokiolona avy amin’ny sehatra tsy miankina handray ny fisotroan-dronono any amin’ity banky ity, misy fandraisana manokana ho azy ireo, miaraka amin’izany ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana. Ahitana tolotra maro izao fiaraha-miasan’ny roa tonta izao, ho an’ireo zokiolona, manamora ny fiainan’izy ireo, toy ny fahazoana mampiasa Gab (Guichets automatiques de la banque) miisa 122, amin’ny fotoana rehetra. Misy, ohatra, ny « Crédit Mitsinjo » ahazoan’ireo misoratra ao amin’ny Cnaps mindram-bola hatramin’ny valo tapitrisa ariary, haverina ao anatin’ny enim-bolana hatramin’ny roa taona. Hamoraina ny fepetra rehetra ho an’izany findramam-bola izany, tsy takina antoka manokana. Mety ha­voaka ao anatin’ny 24 ora ny vola hindramina, raha mahafeno ny fepetra rehetra. Manome fanazavana ny tombontsoa rehetra ny BNI Madagascar amin’ny alalan’ny tambajotrany, manampy mi­van­tana ireo misotro ronono ao amin’ny Cnaps maniry ha­nokatra petra-bola. Safidin’ny maro anisa amin’ireo zokiolona ireo rahateo ny banky voalaza eto. Izao fiaraha-miombona antoka izao koa ny hanombohan’ny Cnaps ny fanavaozana ny fanampiana ara-tsosialy (digitalisation).R.MathieuL’article Fiaraha-miasa BNI-Cnaps : tsy ho vesatra ho an’ny fiarahamonina ny zokiolona a été récupéré chez Newsmada.
Voalohany amin’ny tantaran’ny Banky afrikanina momba ny fampandrosoana (BAD) ny hanao fivoriambe amin’ny alalan’ny fifandraisan-davitra, ny 26 sy 27 aogositra ho avy izao. Izany no hatao, ho fanajana ny fepetra hiadiana amin’ny Covid-19, hiatrehana indrindra ny fanarenana ny toekarena aorian’ity valanaretina ity. Anatin’ny fandaharam-potoana ny fifidianana ny governoran’ny BAD, izay mafy ny asa miandry azy ho an’ny dimy taona manaraka.Misy fiantraikany ratsy betsaka amin’ny toekarena afrikanina ity valanaretina ity, nampidina ny vidin’ny akora sy ny vokatra maro ny fepetra noraisin’ny fitondram-panjakana hatramin’ny nidiran’ny Covid-19, ny volana marsa 2020. Ohatra, nampikatso ny fifanakalozana ara-barotra ny fanakatonana ny sisin-tany. Na mandalo fotoan-tsarotra aza, manampy amin’ny fomba samihafa ny firenena maro, mpikambana ao aminy ny BAD, anisan’izany i Madagasikara. Ny 27 aogositra izao no hatao ny fifidianana. Saika ireo governoran’ny Banky foibe na minisitry ny Toekarena amin’ny tany mpikambana 54, faritra afrika sy 27 avy amin’ny tany mpikambana faritra hafa no handray anjara. Tokana ny kandida, i Akinwumi Adesina, governora am-perinasa.R.MathieuL’article Fivorian’ny BAD: hiatrehana ny fanarenana ny toekarena aorian’ny Covid-19 a été récupéré chez Newsmada.
Toy ny isaky ny asabotsy fahatelo amin’ny volana, hanatanteraka “tagnamaro” ny minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina (MCC), androany. Nosafidiana amin’ity andiany ity ny eny Ambohitsaina, izay hita fa tsy ampy fikolokoloana. Araka ny fantatra, ho mafimafy ny asa satria hisy ny fandokoana ireo trano fianarana, hita ho efa mihavasoka. Eo koa ny fanadiovana sy ny fanalana ny lobolobo, izay manangona voalavo sy manaratsy endrika ity toeram-pampianarana ambony ity.Entanina handray anjara amin’izany voalohany ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny eny amin’ny Oniversite sy ireo mpianatra eny. Raha tsiahivina, tetikasa fifanampiana, entina hamohazana indray ny fitiavan-tanindrazana ao amin’ny Malagasy, ny “tagnamaro”. Asa mivaingana sy azo tsapain-tanana ho tombontsoa iombonana ny atao.Hetsika iray enti-manova ny toe-tsaina mba hahay handray andraikitra amin’ny fanarenana ny firenena sy mba hahay hanaja ny fananana iombonana ny “tagnamaro”. Entanina handray anjara amin’izany ny olom-pirenena rehetra, ny fikambanana, ny sehatra miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana, ireo masoivoho vahiny eto amintsika, sns.Natomboka tamin’ny volana marsa ny “tagnamaro” ka, ankoatra ny eto an-dRenivohitra, manatanteraka izany koa ny any amin’ny faritra samihafa.Landy R. L’article Tagnamaro-MCC: hodiovina ny Oniversite a été récupéré chez Newsmada.
Taorian’ny tsy fitovian-kevitra eo amin’ ireo ray aman-drenin’ ny mpianatra, dia ireo sekoly tsy miankina indray no mampiaka-peo. Nivoaka tamin’ny fahanginany ry zareo avy ao amin’ny Federasionan’ny sekoly tsy mian kina eto amintsika mano loa na ny firosoana any amin’ny fankatoavana ny antontan-kevitra farany amin’ilay Teti-pivoarana ho an’ny fanabeazana na PSE. Voakiana mafy ny fisalobon-koman’ny fanjakana tamin’ny famaritana an’ireo hevi-dehibe tapaka sy nasiam-panitsiana ao anatin’izany PSE izany. Heverin’ireo lehiben’ ny sekoly tsy miankina fa misy ny fanilihan’ny fanjaka na azy nandritra ny fanovàna natao tamin’ny PSE. “Fampandalovana an’izay fanitsiana ihany no nataon’izy ireo taminay. Heverinay nefa fa mpiaramiombon’antoka amin’ny famolavolana sy ny fiheverana ny fanatsarana ny fampianarana izahay”, hoy Rakotonirina Jean Claude, filoha lefitry ny Federasionan’ ireo sekoly tsy miankina, teny Analakely, omaly. Takian’izy ireo ny tokon’ ny hisian’ny firindran’ny asa eo amin’izy ireo sy ny fanjakana ka handraisany anjara amin’ny fakan-kevitra samihafa. “ Tsy ny fanovàna no tsy ekenay fa tokony hiainga amin’ny fiarahana mamolavola ny fandraisanay anjara. Somary nisy fahatarany rahateo ny fahazoanay vaovao mikasika izany”, hoy ny fanampim-pazavan- dRakotonirina Jean Claude. Tetiandrom-pampianarana Manainga ny tompon’ andraikitra izy ireo mba hisian’ny fiaraha-miasa sy ny fisokafan’ny minisitera tompon’andraikitra amin’ireo mpisehatra samihafa amin’ ny fanatsarana ny tontolon’ ny fampianarana. Nasian’ireo talem-paritra folo mandrafitra ny Federesiona tsindry ny tokony hamerenana ny tetiandrom-pampianarana amin’ny teo aloha ka hiantomboka amin’ny volana septambra ny fampianarana ary hifarana ny volana jona amin’ny taona ho avy. Efa nifandimby naneho hevitra tamin’ity teboka ity tokoa, ny ampahany tamin’ izy ireo teo aloha saingy nohamafisin’izy rehetra izany, omaly. Voalazan’izy ireo rahateo fa manana lanjany amin’ny fampianarana eto amintsika ny sekoly tsy miankina. “Mangataka izahay mba ho amin’io no fototra hiaingana amin’ny fandrafetana ny tetiandrom-pampianarana. Mba hahafahan’ny mpianatra misitraka sy mankalaza ny Fetim-pirenena am-pilaminana tsy tandindonin’ny fanadinana no anton’izany”, hoy hatrany ny mpitondra tenin’izy ireo ity. Nanamafy kosa ny tompon’ andraikitra iray ao amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam- pirenena, ny fampianarana teknika ary ny fanofanana araka asa fa tsy nisy velively ny fanilihana an’ireo sekoly tsy miankina. “Anisan’ny mpandray anjara tao anatin’ny fanaovana tombana an’io Teti-pivoarana io izy ireo”, hoy ny fanazavany. Ny sekretera jeneralin’ny minisitera, Razafinjato Aurélie kosa indray no nanamafy fa: “ho tohin’ny dinika tombana ho an’ny PSE, dia efa noraisina ny soson-kevitry ny rehetra. Efa misy volavolan-kevitra niarahana nanao teny ary efa any amin’ny governemanta io soson-kevitra io saingy miandry fankatoavana ny famoahana azy ofisialy”, hoy izy. Marihina fa efa mirona ho amin’ny famerenana ny tetiandro teo aloha ny minisitera ankehitriny. L’article Tontolon’ny fampianarana :: Mikorontana ny resaka manodidina ny Teti-pivoarana ho an’ny fanabeazana (PSE) est apparu en premier sur AoRaha.
Nanaovana fanadihadiana ny fangaraharan’ny tetibolam-panjakana eto Mada­gasikara sy ireo manana andraikitra amin’ny fanaraha-maso. Fanontaniana 145 ny naroson’ny manampahaizana mahaleo tena momba ny toekarena, fanadihadiana manodidina ny fangaraharan’ny tetibolam-panjakana 2019.Nanaovana tombana izay fangaraharan’ny tetibolam-panjakana izay eto Madaga­sikara (EBO)* ka namoahana valin’ny fanadihadiana ny tetikasa na ny fandaharanasa sy ny vanim-potoana mifandraika amin’izany hatramin’ny 31 desambra 2018 momba ny fangaraharan’ny tetibolam-panjakana 2019. Miara-miasa manatanteraka ny fanadihadiana ny manampahaizana mahaleo tena ivelan’ny fanjakana miaraka amin’ny so­lontenan’ny mi­nisiteran’ny Toekarena sy ny tetibola. Mangarahara, anisan’ny fepetra takin’ny mpi­ara-miombona antoka mpamatsy vola ho fanta-bahoaka. Mifantoka amina teboka telo ny valin’ny fanadihadiana nanomezana isa an’i Ma­da­gasikara: ny fahitan’ny va­hoaka ny mangarahara mom­ba ny tetibola ampiasana (40/100), ny fahafahan’ny vahoaka mandray anjara amin’ny famolavolana ny tetibola (6/100) ary ny rafitra mpanara-maso (35/100). Nomari­hin’ny fiarahamonim-pirenena MSis Tatao fa mitombo ny isa azon’i Madagasikara raha oharina ny tamin’ny 2017, 34/100. Na izany aza, mbola ambany be ireo isa ireo, izay 61/100 ny salanisa ambany indrindra. Raha i Madaga­sikara manokana, voasokajy ho misy mangarahara, saingy ambany indrindra.Tsy mandray anjara mivantana ny solombavambahoakaNomarihin’ny IBP* fa tsy manome vaovao ampy mom­ba ny tetibola ny ankamaroan’ny fitondram-panjakana aty Afrika. Na misy fivoriana momba ny tetibolam-panjakana eo anivon’ny Anteni­miera, tsy mampandray anjara mivantana ny solombavambahoaka ny eto Madaga­si­kara, tsy ahafahana miara-midinika ny amin’izay sehatra tokony ho laharam-pahamahena hanokanana tetibola matanjaka. Zava-dehibe ny fahafantarana ny tetibola raha mifandraika marina amin’ny politika nambaran’ny fanjakana, ohatra, tetibola ho an’ny faritra na ny kaominina lavitra. Ilaina ny fangaraharana ny fitantanana amin’izao krizy ateraky ny Covid-19 izao, izay misy akony lehibe eo amin’ny toekarena ny fahaiza-mitantana.R.MathieuEBO* : Enquête sur le budget ouvert IBP* : International budget partnershipL’article Fanadihadiana : tsy ampy mangarahara ny tetibolam-panjakana a été récupéré chez Newsmada.